SAS Mobile Pos မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲ
Mobile ဖုန်း ၁ လုံးရှိရုံဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အရောင်းဆိုင်များအတွက် မိမိတို့ကုန်ပစ္စည်းအခြေအနေ၊ ငွေကြေးအခြေအနေတို့ကို အချိန်ကုန်သက်သာစွာဖြင့် စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် ရေးဆွဲထားသော Mobile App ဖြစ်သည်။ Mobile ဖုန်းတစ်ခုရှိရုံဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး ကို ထိန်းချုပ်နိုင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။ #SmartAccountantSoftware #မိုဘိုင်ဖုန်းသုံးစာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲ #SASMobilePosSystem #Version:2.0 Version- 2.0 Platform- Android Price- 50000 MMK Only (ငါးသောင်းကျပ်သာကျသင့်ပါမယ်။) 🌟လုပ်ဆောင်ချက်များ - အ၀ယ်စာရင်း - အရောင်းစာရင်း - ကုန်စည်လက်ကျန်စာရင်း - အကြွေးစာရင်း - ပေးသွင်း/လက်ခံငွေစာရင်း - ကုန်ကျစရိတ်စာရင်း - လစဉ်အစီရင်ခံစာ - နေ့စဉ်အစီရင်ခံစာ - လအလိုက် အရှုံးအမြတ်စာရင်း - ရက်အလိုက် အရှုံးအမြတ်စာရင်း စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အခြား Feature များစွာပါဝင်ပါသည်။ 🌟အဝယ်စာရင်း (နေ့စဉ်အဝယ်စာရင်းကြည့်လို့ရသလို ရက်/လ/နှစ်အလိုက် filter လုပ်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။) 🌟အရောင်းစာရင်း (နေ့စဉ်အရောင်းစာရင်းကြည့်လို့ရသလို ရက်/လ/နှစ်အလိုက် filter လုပ်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။) 🌟အကြွေးစာရင်း (voucher/receipt/supplier/customer အလိုက် ရရန်ရှိ/ပေးရန်ရှိ) 🌟ပေးသွင်း/လက်ခံငွေစာရင်း (supplier/customer အလိုက် ပေးသွင်းငွေ/လက်ခံငွေ) 🌟ကုန်ကျစရိတ်စာရင်း (သယ်ယူစရိတ်၊ဝန်ထမ်းစရိတ်၊ဆိုင်ခန်းစရိတ်စသည်) 🌟လစဉ်အစီရင်ခံစာ (တစ်လအတွင်း ရောင်းရငွေ၊ဝယ်ယူငွေ၊ကုန်ကျစရိတ်၊ ရရန်ရှိ၊ပေးရန်ရှိ စသည်) 🌟နေ့စဉ်အစီရင်ခံစာ (နေ့စဉ် ရောင်းရငွေ၊ဝယ်ယူငွေ၊ကုန်ကျစရိတ်၊ ရရန်ရှိ၊ပေးရန်ရှိ စသည်) 🌟လအလိုက် အရှုံးအမြတ်စာရင်း (လအလိုက်အကြမ်းအမြတ်၊လအလိုက်အသားတင်အမြတ် စသည်) 🌟ရက်အလိုက် အရှုံးအမြတ်စာရင်း (ရက်အလိုက်အကြမ်းအမြတ်၊ရက်အလိုက်အသားတင်အမြတ်) အခြား feature တွေအနေနဲ့ 🌟Ethernet Printer/Wifi Printer Bluetooth Printer စတဲ့ Pos Printer များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဘောက်ချာကို Print ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ 🌟Cash Drawer များ နှင့်လည်း ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 🌟ရောင်းဈေး/ဝယ်ဈေး နဲ့ ကုန်စည်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို အလွယ်တကူကြည့်နိုင်မယ်။
\_u2b50\_u2b50Odaberite model koji Vam najviše odgovara\_u2b50\_u2b50\_n\_u2728\_u2728\_u2728\_u2728USISIVAČ ZA PEPEO\_u2728\_u2728\_u2728\_u2728\_n\_ud83d\_udc47Za više informacija kliknite na "See more"\_nili na "Prikaži još"\_ud83d\_udc47\_n\_n\_ud83d\_udd25\_ud83d\_udd25 USISIVAČ PEPELA MAC-198 MACHTIG \_ud83d\_udd25\_ud83d\_udd25\_n\_n\_ud83d\_udcb5\_ud83d\_udcb0Cena: 3390din + ptt \_ud83d\_udcb0\_ud83d\_udcb5\_n\_n\_ud83d\_udd38zapremina 15l.\_n\_ud83d\_udd38snaga 1200W\_n\_ud83d\_udd38debljina lima 0,35mm\_n\_ud83d\_udd38gibljivo crevo 1m.\_n\_ud83d\_udd380,2m.aluminijska cev\_n\_ud83d\_udd38hepa filter\_n\_ud83d\_udd38vatrootporni poklopac\_n\_ud83d\_udd38vatrootporna posuda\_n_________________________________________\_n\_n\_ud83d\_udd25\_ud83d\_udd25 USISIVAČ PEPELA MAC-199 MACHTIG \_ud83d\_udd25\_ud83d\_udd25\_n\_n\_ud83d\_udcb5\_ud83d\_udcb0Cena: 3790din + ptt \_ud83d\_udcb0\_ud83d\_udcb5\_n\_n\_ud83d\_udd38zapremina 18l.\_n\_ud83d\_udd38snaga 1400W\_n\_ud83d\_udd381,2m.crevo obloženo metalnom zaštitom,23cm.\_n\_ud83d\_udd38Aluminijska cev\_n\_ud83d\_udd38hepa filter\_n\_n\_u2757\_ud83d\_udce3\_ud83d\_udce3 BITNA NAPOMENA: Žar se ne sme usisavati. \_ud83d\_udce3\_ud83d\_udce3\_u2757\_n\_n \_ud83d\_ude9b Ptt iznosi 260din\_n\_ud83e\_uddfeGARANCIJU dobijate na 25 meseci.\_n\_n\_u2b50 Pun asortiman na:\_u2b50\_nhttp://www.dvorshop.rs/\_n\_n\_u260eTakođe nas možete pozvati i na 061/619-07-97\_u260e\_n\_ud83d\_uded2Srećna kupovina!\_ud83d\_uded2\_n\_ud83d\_ude0dVaš Dvor Shop tim\_ud83d\_ude0d
Download or stream Filter Bubble for free here: https://linktr.ee/MatWard
Moms, getachance to win an educational fund or tablets with #FlexThatBatangMayLaban Dance Challenge! Deadline of entries is on November 14, 2020. Try the #FlexThatBatangMayLaban filter here: shorturl.at/gDLQ0 STEP 1: Buy any Bonakid Pre-School® 3+ Product STEP 2: Do the Laban ng Katawan moves with your3pataas child using the #FlexThatBatangMayLaban Filter on Facebook Stories, make sure to feature the pack in your video! STEP 3: Upload on your Facebook Account, make it public, tag Bonakid Pre-School® 3+ and use the #FlexThatBatangMayLaban hashtag and your region #BatangMayLaban(GMA/NL/SL/VIS/MIN) Check out the contest mechanics here: shorturl.at/rvQZ8 SALI NA! Promo runs from 08 September to 31 December 2020. Per DOH-FDA CFRR Permit No.: 1002 s. 2020 ASC Ref No. W049P092920BS
New & Used Chevrolet Cadillac Buick GMC Dealer | Serving Cochrane, Airdrie & Strathmore, AB | CMP GM in Calgary, AB!
🤩Mountain bike color changing polarized riding glasses ✅the light-change gradient technology,Let you see more clearly and reflect more quickly during exercise! ✅Oakley glassescan filter 100% of ultraviolet rays! ✅aerodynamic design!
Coway 全马代理 0127207177 justin fok
你还用煤气炉烧开水吗？还再加冰块喝冷水？ 现在Coway净水机会让你大爱 要冷要热要温水任您选择，省电省时间再省功夫。 - 5年 Service Free - 5年 Filter Free - 5年 Warranty Free - 天灾保家 - (全马) 免费 送货 & 安装 有兴趣了解详情请联系 Call: 0127207177 Justin http://www.wasap.my/60127207177
Ready to get #uptomischief? Play with Felix in his pawsome AR Filter. 🤳
Pet Waste Station for your Home & Business | PawPail